Thwebula Swamp Attack 2.0 isizulu – Vessoft
Thwebula Swamp Attack
Swamp Attack – an umdlalo Arcade ukuvikela indlu ka umdlali ngokumelene nezilwane crazy. Swamp Attack ihlukaniswe yaba iziqephu ezimbalwa inombolo enkulu amazinga kanye nekwenyusa yinkimbinkimbi bedlula phakathi Gameplay. Umdlalo ine izilwane ezigcwele inzondo ezihlasela indlu amaqembu kanye babe ijubane ezehlukene ukunyakaza, amaphuzu impilo kanye siqu attack yabo ekhethekile. Swamp Attack iqukethe esitolo arsenal enkulu izikhali, iziqhumane Imigoqo ukuzivikela ukuthi abe khona emva bedlula inombolo ethile amazinga. Futhi Swamp Attack has imali emdlalweni umdlali uthola for the ukubhujiswa izilwane crazy kanye amabhonasi bathola.
Amazinga abaningi of yinkimbinkimbi ezahlukene
Izilwane eziningi crazy
A arsenal enkulu izikhali Imigoqo ukuzivikela
Ukutholakala amazinga ibhonasi
Amandla ukuthenga zemali golden
Amazwana on Swamp Attack:
Swamp Attack Ahlobene software:
English, Afrikaans, Français, Español... TED 2.4.0